Kangana Ranaut Oo Markale Si Geesinimo Ah Uga Hadashay Xanta Ku Saabsan Guurkeeda - Hablaha Media Network
Kangana Ranaut Oo Markale Si Geesinimo Ah Uga Hadashay Xanta Ku Saabsan Guurkeeda
HMN:- Atariishada caanka ah ee Bollywood Kangana Ranaut ayaa daaha ka qaaday inay haatan diiradda saareyso shaqadeeda aflaan jillista oo keliya balse haddii ay guursaneyso aysan marnaba ka qarin doonin adduunka.
Kangana filimkeeda xigga wuxuu noqon doonaa Rangoon kaasoo uu Director ka yahay Vishal Bhardwaj isla markaana ay la hogaaminayaan xiddigaha Shahid Kapoor iyo Saif Ali Khan.
“Waxaan haatan doonayaa inaan diiradda saaro xayeysiinta aan u sameynaayo filimka Rangoon. Waxaana jiri doona waqti aan u helo guurkeyga kamana xishoon doono inaan guursado,” ayey 29 sanno jirtaani u sheegtay shabakadda PTI.
“Marnaba guurkeyga kama qarsan doono adduunka, waan caddeyn doonaa cidda aan xiriirka la leeyahay iyo waqtiga aan guursanaayo, sababtoo ah waxaan ahay shaqsi aan runta ka gamban”.
Atariishada filimka Tanu Weds Manu ayaa dhawaan daaha ka qaaday inuu jiro shaqsi uu xiriir jaceyl kala dhexeeyo isla markaana ay dooneyso inay guursato sannadkaan 2017ka.